WestgoldUHT Full CreamMilk1ltr New Zealand - Grand Food Mart
WestgoldUHT Full CreamMilk1ltr New Zealand
UHT Full Cream
UHT Milk is ultra-heat treated foralong shelf-life using indirect heating technology that providesaminimally processed product that is nutritious and fresh-tasting. No additives or preservatives, just pure milk. Ideal for people who don’t shop as frequently or, who save it for their home cooking.
Our Westgold UHT milk is sourced from pasture-raised cows that graze free-range, beneath the Southern Alps of New Zealand. Withanaturally fresh, creamy taste it is suitable for drinking, cooking, or baking.
Ultraheat treated homogenized full cream milk.
Energy 707 kJ 283 kJ
Protein 9.3 g 3.7 g
Fat, total 9.0 g 3.6 g
Saturated 6.4 g 2.5 g
Trans fat <1.0 g <1.0 g
Carbohydrate 12.8 g 5.1 g
Sugars 12.8 g 5.1 g
Sodium 100 mg 40 mg
Calcium 338 mg (42% RDI*) 135 mg
ခွန်အားပြည့်ဖို့အတွက် Westgold နွားနို့တစ်ခွက် !!!!!
နွားနို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာ ဗီတာမင်နဲ့ မင်နရယ်တွေများစွာပါဝင်တဲ့အပြင် ဗီတာမင် အေ၊ မက်ကနီစီရန်၊ Zinc နဲ့ ဘီ ဝမ်းတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက်ရော၊ အလှအပအတွက်ပါ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရရှိနိုင်ပါတယ်။ နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာ Antioxidants ပါဝင်တဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ Oxidation Damage ဖြစ်ချင်းကို ခုခံပေးပါတယ်။ Muscle Lose ဖြစ်တာကို လျော့ချပေးပါတယ်။ အရိုးနဲ့သွားတွေသန်မာစေတဲ့အတွက် ငယ်စဉ်ထဲက ကလေးတွေရဲ့ အရိုးနဲ့သွားကျန်းမာရေးအတွက် နွားနို့ကို သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့လည်း အသက်ကြီးတဲ့အခါ အရိုးပွရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် နွားနို့ကို ငယ်စဉ်ထဲက သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ နွားနို့ကို တစ်နေ့တစ်ခွက် ပုံမှန်သောက်သုံးခြင်းအားဖြင့် အသားအရေကကျန်းမာပြီး Glow ဖြစ်စေပါတယ်။ နှလုံးရောဂါကိုကာကွယ်ပေးပြီး သွေးထဲမှာရှိတဲ့ ကိုလက်စရော level ကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို တိုးတက်စေပါတယ်။ Stress ကိုလည်း လျော့နည်းစေပါတယ်။
နယူးဇီလန်နိုင်ငံထုတ် Westgold နွားနို့မှာ Vitamin နဲ့ Minerals ဓာတ်တွေ များစွာပါဝင်တာမို့ အရိုးအဆစ်ကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပြီး အာဟာရပြည့်ဖြိုး ခွန်အားတိုးစေပါတယ်။ လူကြီးလူငယ်နဲ့ အားကစားသမားတွေအနေနဲ့ နေ့စဉ်သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ အာလုံးအတွက် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် Westgold နွားနို့များကို ရန်ကုန်မြို့တွင်သာမက မန္တလေးမြို့တွင်ပါဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။